UPatko Nyaraló Miskolctapolca - I-Airbnb
UPatko Nyaraló Miskolctapolca
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Fahidi
Ingqikithi yamafulethi amathathu e-Patkó Nyaraló yethu ne-Patkó Apartman atholakala e-Miskolctapolca ehlathini elihle lapho ungajabulela khona imvelo, kude nomsindo wedolobha. Engadini i-BBQ enamalahle amahhala iyatholakala kodwa uma ungathanda ukuzwa isimo saseHungary sephathi yasengadini ungasebenzisa ngisho ne-caldron yethu (bogrács). Sizojabula kakhulu ukuhlinzeka hhayi kuphela izinkuni zokubasa zamahhala, kodwa ngisho neminye imibono yokupheka. Lapha nasezinkundleni zokudlala zezingane ungase uhlangane nezinye izivakashi ezimbalwa. Uma ukhetha le ndlu sonke isakhiwo sizoba ikhaya lakho ngesikhathi sokuhlala kwakho, kuyilapho ingadi yabelwa ezinye izivakashi ezimbalwa.
Uma bekufanele ushiye ikhaya lakho e-Ukraine sicela uxhumane nathi ngenani elehlisiwe!
Ungafinyelela endlini yethu yezivakashi emgwaqeni omangalisayo, kodwa ungakhathazeki vele ushayele kancane. Isevisi yeselula ibuthakathaka kakhulu ukuqinisekisa ukuthi akekho ozophazamisa ukuthula, kodwa uma ungafuni ukuphuma ngokuphelele kugridi ungasebenzisa i-Wifi yamahhala.
Uma ufisa ukunyakaza kancane futhi ujabulele ihlathi vele uhambe emgwaqeni futhi uzozithola usemgwaqweni osayiniwe wokuqwala izintaba. Ungaphuthelwa yithuba lokucwiliswa emanzini okugeza okuhlukile Komhume, vakashela Inqaba yasendulo yaseDiósgyőr, noma ubone impophoma yaseLillafüred.
Umphathi wendlu yethu yezivakashi uzokwamukela mathupha, akusize uthole indawo futhi akunikeze okhiye.
Inombolo yepholisi: MA21001516
Izilimi: 中文 (简体), English, Magyar